We put you first - With UKHOZI FM
Uhlale umi ngomumo. Umakwenzeka wehlelwa okuthile
Cabanga nje ukuthi bengungaba mnandi kangakanani ukuba bekuthiwa izinto zihamba ngendlela esizihlela ngayo, kodwa ke esikhathini esiningi lokho akwenzeki. Uma zingahambi ngokohlelo, i-1 st for Women, ehlinzeka ngomshwalensi owenzelwe ngqo abesimame, ikhona njalo ukuzoqinisekisa ukuthi uhlezi umi ngomumo. Uma kwenzeka wehlelwa okuthile.
Kuleviki, i-1st for Women ibambisene nokhozi FM bazophana ngo R50,000 ukulungiselela lezo zigigaba ezingakwehlela ungalindele. Ngenela lapha ngezansi/lapha, uSipho "Sgqemeza" Mbatha kungenzeka akushayele ucingo ezokupha uR10,000.
1st for Women – hlala umi ngomumo. Uma kwenzeka wehlelwa okuthile
1st for Women, umhlinzeki ngosizo lwezezimali osemthethweni. Kunemigomo nemibandela
Ngingathanda ukuthintwa ngabakwa First for Women ukuze ngithole kabanzi ukuthi kuzobiza kangakanani, ngaphandle kokuzibophezela ngaphansi komthetho othile.
Njengabantu besifazane, sihamba siphethe cishe yonke into esicabanga ukuthi sizoyidinga, ezikhwameni zethu noma ezimotweni. Sihlezi sicabanga ngokuthi umuntu kumele asheshe aphume endlini, okungenani ngemizuzu engu 15, ngoba kungenzeka kube ne traffic, size sipakishe nezikhwama ezimbili uma sizothatha uhambo, sicabangela amakhaza noma imvula engase ine. Eqinisweni, siyathanda ukulungiselela izimo okungenzeka sihlangabezano nazo. Yingakho i-1st for Women ikwethulela umshwalensi owenzelwe ngqo abesifazane ukuqinisekisa ukuthi uhlezi umi ngomumo, uma kwenzeka wehlelwa okuthile. Ngakho uma uthatha umshwalensi wethu wemoto nowempahla yasendlini, kune Guardian Angel ongayishayela 24/7 (ubusuku nemini) uma udinga ukushintshelwa isondo, ukudonselwa imoto yakho, umuntu ozoqinisekisa ukuthi uphephile lapho ukhona noma uma udinga i-locksmith ongayethemba, umakhi, i-electrician/umuntu osebenza ngogesi, umhlengikazi ongakusiza nokunye okuningi.
Klikha lapha ukuze uthole i-quote yomshwalensi owenzelwe ngqo abesifazane, wonge imali engafika ku R475 ngenyanga * kwi pholisi yomshwalensi wakho wemoto nowempahla yasendlini.
FSP 15261. Kunemigomo neibandela *ehambisna nokuthathwa kwawo omabili lama pholisi
Return to UKHOZI FM
Thank you for entering the 1st for women competition. You have requested for a 1st for women consultant to call you back for an obligation free quote, please confirm below;
Yes Please Website
Thank you for entering the 1st for women competition.